YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 29
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/20120အကြံပြုခြင်း
March 28, 2012 - Foreign Affairs Minister John Baird today issued the following statement:
“Canada is pleased to send Senator Consiglio Di Nino and Parliamentary Secretary Deepak Obhrai to Burma to witness and report on the parliamentary by-elections of April 1.
“These by-elections are the latest tests of commitments made by Burmese authorities to real reforms. Canada and the world are watching.
“Burma invited each member and dialogue partner of the Association of Southeast Asian Nations to sendasmall delegation to witness the voting. While this does not allow for comprehensive monitoring, Canada is keen to have eyes and ears on the ground at this important moment.
“As I said in meetings during my recent visit to the country, we expect these elections to be free and fair. We will base future actions on whether we see progress in developingamore open, just and prosperous society.
“Our witnesses will carry with them the hopes of all Canadians that these elections are conducted peacefully and produce results reflecting the will of the Burmese people. I look forward to receiving their report upon their return to Canada.”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/2012 1 အကြံပြုခြင်း
လျှပ်စစ်တွေ ပိုလို့ ရောင်းတောင်စားနေရပါတယ်ဆိုပြီး.....
ရန်ကုန်မြို့ တော် အား အချိန်ပိုင်းစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးမည်
by The Voice Weekly on Thursday, March 29, 2012 at 6:20am ·
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သုံးစွဲမှု ထက်ဝက်ကျော်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့ တော်တွင် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အချိန်ပိုင်း စနစ်ဖြင့်သာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဝေနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်လတ် က ယနေ့ မတ်လ ၂၉ မွန်းလွှဲ ၂ နာရီခန့်တွင် ၎င်း၏ ရုံးခန်း၌ The Voice Weekly သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် အချိန်ပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဝေ ပေးရာတွင် အုပ်စုကြီး ၃ စု အဖြစ် ခွဲခြားထားပြီး မြို့ နယ် အုပ်စု၊ စက်မှုဇုန် အုပ်စု ၂၄ နာရီ မီးရရှိနိုင်မည့် အုပ်စု ဟူ၍ ခွဲခြားထားကြောင်း၊ မြို့ နယ် အေ၊ ဘီ ၊ စီ ဟူသော အုပ်စု သုံးစုနှင့် စက်မှုဇုန်တွင် အေ၊ဘီဟူ၍ အုပ်စုငယ်များ ခွဲခြားထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ က မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် ဖော်ပြထားသည်။
မီးပေးဝေသော အချိန်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း အပြည့်အဝ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူများကို ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိသော ရေစက်များကို သီးသန့် အချိန်ပြည့် သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ မှ စုံစမ်းသိရသည်။
"အရင်က အချိန်ပိုင်း စနစ်နဲ့ မီးပေးခဲ့တုန်းက ကိုယ်မရတဲ့ အလှည့်မှာ မီးပျက်တာ မှန်ပေမယ့် ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် မကြာခဏ ပျက်နေတယ်" ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကြည့်မြင့်တိုင် မြို့ နယ် အမှုဆောင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အချိန်ပိုင်းစနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဝေပေးနေသော ကာလတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပျက်တောင်ခြင်းများ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့ နယ် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးရေး အဖွဲ့များထံသို့ စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့  လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ကဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အလှည့်ကျ လျှပ်စစ်မီးပေးစနစ်ကို ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်စတင်မည် လူနေရပ်ကွက်များအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၆နာရီမီးလာ ၆နာရီမီးပြန်ပျက်မည့်စနစ်ဖြင့် ဇူလိုင်လအထိ လျှပ်စစ်မီးပေးသွားမည်
Thursday, 29 March 2012 20:28
ရန်ကုန်မြို့တွင် အလှည့်ကျမီးပေးစနစ်ကို ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ဧပြီလ ၂ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့မှ အတွင်းရေး မှူး ဦးမောင်မောင်လတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အလှည့်ကျမီးပေးစနစ်တွင် လူနေရပ်ကွက်များအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၆နာရီမီးလာပြီးနောက် ၆နာရီ ကြာမီးပြန်ပျက်သည့် စနစ်ဖြင့် အလှည့်ကျမီးပေးဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ် စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့မှ အတွင်းရေး မှူးဦးမောင်မောင်လတ်က “ရန်ကုန်မြို့မှာ အလှည့်ကျမီးပေးစနစ်ကို ဧပြီလ ၂ရက်နေ့မှာ ပြန်စပါမယ်။ လူနေရပ်ကွက်တွေမှာ A၊ B၊ C သုံးအုပ်စု ခွဲထားပါမယ်။ မနက် ၅နာရီကနေ ၁၁နာရီအထိ နှစ်အုပ်စု၊ မနက် ၁၁ နာရီကနေ ညနေ ၅နာရီအထိ နှစ်အုပ်စု၊ ညနေ ၅နာရီကနေ ည ၁၁နာရီ အထိ နှစ်အုပ်စု၊ ည ၁၁နာ ရီကနေ မနက် ၅နာရီအထိ ၂အုပ်စုကို အလှည့်ကျမီးပေးစနစ်နဲ့ ပေးသွားမှာပါ။ တစ်ရက်(၂၄နာရီ)မှာ မီး ၆နာရီလာ၊၆နာရီပြန်ပျက်၊ ၆နာရီပြန် လာ၊ ၆နာရီပြန်ပျက်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်မှာပါ။၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရမယ့် အုပ်စုတစ်စုရှိပါမယ်။ အဲဒီအုပ်စုထဲမှာ ဘဏ်၊ အကျဉ်းထောင်၊ လေဆိပ်၊ သံ ရုံ၊ ရဲစခန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဌာန၊ ဆေးရုံတွေစတဲ့ အရေးကြီးနေရာတွေပါပါမယ်။ စက်မှုဇုန်တွေကိုတော့ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးမီးပေးပါမယ်။ မနက် ၆နာရီက ၁၁နာရီတစ်ပိုင်း၊ ၁၁နာရီက ညနေ ၄နာရီတစ်ပိုင်း ခွဲပြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ အလှည့်ကျမီးပေးစနစ်ကို ခန့်မှန်းခြေဇူလိုင်လအထိ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မဲစာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့သူများ အိမ်ထောင်စု စာရင်း ယူဆောင်လာပြီး မဲပေးနိုင်
by Yangon Press International on Thursday, March 29, 2012 at 5:05am ·
မတ်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် () မျိုးမင်းထွန်း၊ ပိုင်စိုး
မဲစာရင်းအသီးသီးတွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိသူများပါဝင်နေခြင်း၊ ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများကျန်ခဲ့ခြင်း၊ စာရင်းထပ်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် မှားယွင်းလျှက်ရှိကာ မဲစာရင်းများကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကူးယူမရခြင်းကြောင့် ပြင်ဆင်ရန် များစွာ ခက်ခဲကြောင်းကို ဦးမြင့်လွင်က ရှင်းပြသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ မူးရစ်ရမ်းကားနေတဲ့ ကျေးရွာဥက္ကဌ နဲ့ ဒုရဲအုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့ ဆားပြင်ကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုတင်ဝင်းဆိုသူကို အရက်အလွန်အကျွံမူးနေတဲ့ ကျေးရွာဥက္ကဌ ဦးသိန်းရွှေ နဲ့မြို့နယ် ဒုရဲအုပ် စိုးမိုးအေးတို့က မတရား ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရိုက်နှက်မှုကို မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့က တရွာထဲနေ မောင်ဒေါင်းကြီးဆိုသူက သူ့ရဲ့ နေအိမ်ထဲကို ခဲပစ်သွင်းပါတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲတိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့် အခုလိုရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရိုက်နှက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုတင်ဝင်းမှာ အခုလို ရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့် ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းတို့မှာ သွေးတွေယိုကျတာတွေနဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ ကျောပြင်တွေက အောင့်နေတာကြောင့် တောင်ကုတ်ဆေးရုံနဲ့ စစ်တွေဆေးရုံတွေမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။
အခုအခါ ဒီမတရားရိုက်နှက်မှုကို တောင်ကုတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေမှ ရွာသားအယောက် (၆၀) ခန့်က စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လာရောက် ဖြေရှင်းအရေးယူပေးဖို့ အတွက် တိုင်ကြား တောင်းဆိုထားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
လွတ်လပ်သန့်ရှင်းပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ကြောင်း NLD ပါတီက ပြောကြား
အောက်ခြေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်သန့်ရှင်းပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ကြောင်း NLD ပါတီက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဦးအံ့ဘုန်းမြတ်က ရန်ကုန်မြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ ပါတီဝင်တဦးယခုပင် ဖုန်းဖြင့်
ဆက်သွယ် ပြောဆိုလာပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ ၃၃ မိုင်အကွာရှိ ကြပ်ပြစ်ကျေးရွာတွင်းတွင် NLD ပါတီဝင်များက ထော်လာဂျီကားတစီးဆိုင်ကယ်၈စီးခန့်ဖြင့် ဆောင်းဘောက်စ်အသံချဲ့စက်ငယ်များဖွင့်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ဗီနိုင်းများ ချိတ်ဆွဲလျက် ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံး လှုံ...့ဆော်ရေး လှည့်ခဲ့ကြသည် ဆိုသည်။
ယနေ့ မတ်လ ၂၉ ရက် ညနေ ၅နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ထိုကြပ်ပြစ်ကျေးရွာရှိ
ပါတီဝင်များမှ သက်သေဖြစ်သော အထုခံရသည့် အုတ်ခဲအားလည်း အများအသိသက်သေဖြင့် သိမ်းဆည်းထားကြောင်း၊ ထိုရွာရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အခြားပါတီဝင်များမှ ၀င်ရောက် ထိန်းသိမ်း တားမြစ်ပေးခြင်း မရှိကြောင်း ယခုပင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ ခွပ်ဒေါင်း ပါတီဝင် ကိုဇော်နိုင်က ဆက်သွယ် သတင်းပေးပို့လာပါသည်။ အသေးစိတ် သိ၇ှိလိုပါက ကိုဇော်နိုင် ဖုန်းအမှတ်0947112814 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ။။။။။
တောင်ငူမြို့ ၁၆ ရပ်ကွက် ဈေးလမ်းတွင် ယနေ့ည ၆ နာရီခွဲတွင် ဒီချုပ်အောင်နိုင်ရေး
အဖွဲ့မှ ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ရာ တောင်ငူမြို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်
ဟောပြောပွဲ မကျင်းပမီ ဟောပြောပွဲနေရာသို့ ဦးအောင်စိုးမြင့် စီးနင်းလာသော
တောင်ငူမြို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်း အနီးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အလွန်အားနည်းကြောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်မှ ဟောပြောချက်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
တံတားဦးမြို့နယ် ဇီးပင်ကွေ့ကျေးရွာရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင်များ NLD ပါတီဝင်များကို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းသည့်အမှုမှာ ယနေ့တွင် ပိုမိုပြင်းထန်လာပါသည်။
ဇီးပင်ကွေ့ကျေးရွာရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံးဖွင့်ထားရာအိမ်တစ်အိမ်တွင် လော်စပီကာများတပ်ဆင်၍ NLD ပါတီဝင်များကို မိုက်ခရိုးဖုန်းများဖြင့် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ယမန်နေ့က အတိုင်း"ကော်မရှင်ဥက္ကကြီးဦးတင်အေးခင်းပေးထားတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ပြီး စည်းရုံးဆင်းရဲသေးတယ်"ဆိုပြီး တစ်နေ့လုံးဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေပါသည်။
ည(၁၀)နာရီကျော်သည့် အခါတွင် ရွာသားများက သည်းမခံနိုင်လောက်အောင်မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်လာကြသောကြောင့် NLD ပါတီဝင်ဒေါက်တာအောင်စိုးမြင့်မှတာဝန်ခံ၍ တံတားဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
မဲပေးရမည်စာရွက်ပေါ်ရှိNLDပါတီတံဆိပ်ဘေးအမှန်ခြစ်ရမည့် နေရာတွင်ဖယောင်းများသုတ်ထားကြောင်း မြောင်းမြမြိုနယ် ဒေသခံများထံမှ ကြားသိရပါသည် .....
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၈ နေ ရာအတွက် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုအထူး
မြင့်တက်နေသည်။ ဤအချက် ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက် ပွဲအကြို သတင်းများမှာ ကမ္ဘာ့ သတင်းများတွင် ဦးစားပေးဖော်ပြ ခံနေရခြင်းနှင့်
နိုင်ငံတကာမှ သတင်းထောက်များက ပုံစံမျိုးစုံ ဖြင့်လာရောက်၍ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုသတင်းများရယူရန်ကြိုး ပမ်းမှုများက ထင်ရှားစေသည်။
နောက်တစ်ချက်က ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲက အစိုးရသစ်အတွက် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲ။ အစိုးရအသစ် က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ
ွှတ်ပေးတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်း ချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နေ တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက သေးပေမယ့်
တရားမျှတလွတ်လပ်မလား ဆိုတာ ကြည့်ရမယ်။ တကယ်လို့ သာ ဒီစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ရင် ဥရောပက ပိတ်ဆို့မှုတွေ မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရုပ်သိမ်းလိမ့်မယ်။ နောက်အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ် သိမ်းလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲက အရမ်းအရေး ကြီးတယ်"ဟု
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးရှင်နှင့် ရိုက်တာသတင်း ဌာန သတင်းထောက် အင်ဒရူး မာရှယ်က ပြောသည်။
"၄၈ နေရာက နေရာနည်း သော်လည်း အရမ်းအရေးကြီးပါ တယ်။ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့ ပုံရိပ်ပဲလေ။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က Free & Fair Election ဖြစ်ဖို့ ပြောနေ တာ။ ကျွန်တော်လည်း တွေ့သမျှ နယ်ကပြည်ခိုင်ဖြိုးတွေကိုလွှတ်
တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ Free & Fair Election ဖြစ်အောင်လုပ်ကြ၊ မဟုတ်တာမ လုပ်ကြနဲ့။ တွေ့တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုး
ိုင်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် လူ တိုင်းကို ပြောနေတာ။ Free & Fair Election ဖြစ်ဖို့က လိုကိုလို တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက်ပါ"ဟု ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ အရေးကြီးပုံကို မှတ်ချက်ပေး သည်။ ဦးအေးမောက်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင် စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ပုသိမ်မြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် မတ်လ ၂၄ ရက်က အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို တရားမျှတလွတ် လပ်ရန် ဆောင်ရွက်ထားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပြောကြားခဲ့ သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကော်မရှင်က လွတ်လပ်တရား မျှတသန့်ရှင်းရန် အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ အစိုးရက လည်း မှတ်ကျောက်တင်ခံရန် နိုင်ငံတကာမှ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူများကို ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ အစိုးရသစ် လက်ထက်၌ ပထမဆုံးကျင်းပ မည့် ဤရွေးကောက်ပွဲကို တစ်ကမ္ဘာ လုံးက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့် နေကြမည်ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာမှ စောင့်ကြည့်မည့် ကြားဖြတ်ရွေး
ကောက်ပွဲ လွတ်လပ်တရားမျှတ ပြီး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရန်အတွက် မိမိတို့နိုင်ငံသားအားလုံးက ပံ့ပိုး ကူညီ ရန်လိုကြောင်းလည်း သမ္မတ
အစိုးရက ယခုတစ်ကြိမ်ရွေး ကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတကာ မှ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများကို ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ ပြည်ထောင်
စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လည်း မဲစာရင်းကွာဟမှုများဖြစ် ပေါ်နေသော မဲဆန္ဒနယ်များ တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မဲစာရင်း
ပြင်ဆင်ဖြည့် စွက်ပေးနေသည်။ ထို့အပြင် ယခု အကြိမ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် မည့် နိုင်ငံရေးပါတီအများအ တွက် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများ မရှိသလောက် နည်းပါးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူ များက ပြောသည်။ ထိုအခြေအနေ များမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မကြုံခဲ့ရပေ။
သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလတွင်ကြုံတွေ့ရသော အဖြစ်အပျက် အချို့ကြောင့် နိုင်ငံ ရေးပါတီများပူပန်နေသောအချက်များလည်းရှိနေသည်။
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင် ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီတာဝန်ရှိသူက အောင်နိုင်ရေးစည်းရုံးဟောပြောမှုတစ်ခု တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဖွားကြီးဟူ၍လည်းကောင်း၊အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ထောင်ထွက်လူဆိုးလူမိုက်အဖွဲ့ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဒီချုပ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား နွားထိုးသားဟူ၍လည်းကောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့သို့ ဥပဒေနှင့် မညီ လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် နွားထိုးကြီး မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က မြို့နယ်ကော်မရှင်သို့ ကန့် ကွက်တိုင်ကြား၍ မြို့နယ်ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ နောင်တွင်ဥပဒေနှင့်အညီဟော ပြောမည့်အကြောင်း ခံဝန်လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရကြောင်း ယခုတစ် ပတ်ထုတ် True News ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကြိုတင်မဲ မရှိပေမယ့် နောက်တိုးမဲဆိုတာ တစ်ခုပေါ်နေတယ်။ ကော်မရှင် ကို နောက်တိုးမဲဆိုတဲ့ စာရင်းတွေ လာပေးတယ်တဲ့။ မဲစာရင်းမှာ မပါတဲ့ နောက်တိုးမဲတွေကို ခွင့်ပြု ရမယ်လို့ပြောတယ်။ နောက်တိုးမဲ က ဘယ်လောက်တောင် ရှိလည်း ဆိုရင် ကျွန်တော်တုိ့ရဲ့ မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်မဲဆန္ဒနယ်မှာဆိုရင် ၄၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ရဲတွေရဲ့ နောက်တိုးမဲကလည်း တောင်ညွန့် မှာ ၉၀ လောက်ရှိတယ်။ ဒဂုံဆိပ်
ကမ်းမှာလည်း နောက်တိုးမဲက အရပ်သား ၁၀၀၀ လောက်၊ ရဲ တွေက ၁၁၀ လောက်ရှိတယ်။ ဆို တော့ နောက်တိုးမဲတွေက အများ ကြီးပဲ"ဟုမင်္ဂလာ တောင်ညွန့်မြို့ နယ်မှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာပြည်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုကိုကြီးကလည်း ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် တရားမျှတလွတ်
လပ်မှုမှာရလဒ်ထက်အရေးကြီး ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးသည်။
"ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် ၄၈ နေရာဆိုတာ မပြောပလောက်ပေမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင် မယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အတွက် ထူးခြားတဲ့ရွေးကောက် ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်တဲ့မဲအရေအတွက်ထက် ပိုအရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ်ချဖို့အတွက် သမ္မတ ကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာလည်း ပါဝင်တဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ် စဉ်အဲဒါကို စပြီးစမ်းသပ်မယ့် တာထွက်ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ခြေလှမ်းဟာ ဘယ်လောက်ပွင့် လင်းမှု၊ ထင်သာမှုရှိသလဲ၊ ဘယ် လောက်တရားမျှတမှုရှိသလဲဆို တဲ့ ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်နိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အရေအတွက်ထက်
ိုအရေးကြီးပါတယ်"ဟု မတ်လ ၂၃ ရက်တွင်ပြုလုပ်သော သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်များမှာ
ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် ကွန်ရက် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတ လွတ်လပ်လျှင် အထက်တွင် ဆိုခဲ့ သည့်အတိုင်း အမေရိက၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ
အကူအညီများစွာရမည်ဖြစ် သည်။ ထို့အပြင် အစိုးရအဓိက
လိုလားသော နိုင်ငံတကာအသိုင်း အ၀ိုင်း၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေတ်နောက်ကျပြီး အထီးကျန်
နေခဲ့ရသော နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ခေါင်းမော့ရင်ကော့နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့ လာသူများကပြောသည်။
"လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးတည် တံ့နေသမျှကာလပတ်လုံးက တော့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့ တော့ ခက်တယ်ဗျ။ သို့သော်လည်းပဲ ရှေ့တိုးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဗျ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မအောင်မြင် ဘူး၊ တရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုရင်
နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်ရှိ ပြီး၊ အကူအညီပေးတာတွေကော ရပ်သွားမှာပဲလေ။ အဲတော့ ဒုံရင်း ဒုံရင်းပြန်ဆိုက်မယ်"ဟု ဦးခင် မောင်ဆွေက ပြောသည်။
ဗီးနပ်စ်သတင်းဂျာနယ်မှာ စစစ ရုံးချုပ်ပေါ်က ခုန်ချသွား(ပြုတ်ကျသည်ဟုဆို) တဲ့ ရှမ်းမလေးနန်းဝိုးဖန်ရဲ့ သတင်းဒီတစ်ပတ်ပါလာတယ်။ အဲဒါကို စစစ က လူတွေက အဲ့သတင်းဘယ်ကောင်ရေးတာလဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဘာညာ ခြိမ်းခြောက်သံတွေ ထပ်ထွက်လာပြန်ပြီ။ ရင်ခွဲရုံမှာ သတင်းသွားယူတဲ့ သတင်းထောက် ကိုသံချောင်းကိုလည်း မင်းအန္တရာယ်ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးတယ်။ ဘာအထာတွေလဲ။ ဖုံးချင်တာလား။ ဖိချင်တာလား။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ခင်ဗျားတို့ခေတ် မကုန်သေးဘူး လား။ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ။ သတင်းထောက်တွေကို အစဖျောက်ချင်တာ လား။ ငြိမ်ခံနေကြမယ့် လူတွေလို့ရော ထင်နေတာလား...။
ပြိုင်ပွဲဝင် ဆန်ခါတင်ကား - ဆိုက်ကား
လူ့ စွမ်းအင်သုံး အနှေးယာဉ်လုပ်သား ဆိုက်ကားဆရာတွေရဲ့ခက်ခဲလှတဲ့ ဘ၀တွေကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပါ.. ၁၂ နှစ်ကျော် ဆိုက်ကားနင်းလာတာတောင်မှ ဆိုက်ကားတစီး မပိုင်နိုင်သေးတဲ့ဘ၀တွေ ... ရန်ကုန်တမြို့ ထဲမှာတောင် ဆိုက်ကားပေါင်း သိန်းချီရှိနေတာမို့ဆိုက်ကားဝင်ငွေ အမှီပြုနေရသူ သန်း နဲ့ချီ ရှိနေနိုင်ပါသတဲ့ ... ဒါရိုက်တာ @Ye Min နဲ့Moe Hlaing Nya တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေက ရင်ကို အင်မတန် ထိ စေပါတယ်..
ငါးမင်းဆွေ ၏ စာများကို ဈေးသူဈေးသားများ၏ သဘောဆန္ဒ အရ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး
မြန်အောင်နေခြည်ဈေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ပုဂ္ဂိုလ် ရေး သိက္ခာ ကျစေရန်ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ဖြန့် ဝေသွားသော ငါးမင်းဆွေ ၏ စာများကို ဈေးသူဈေးသားများ၏သဘောဆန္ဒ အရ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးစဉ်။
ဆယ်တန်းမအောင်ဘူး ပြောရင်လည်း စိတ်ဆိုးဦးမယ်.
ENVOY ဂျာနယ် (စင်ရော်မောင်မောင်ပိုင်ဂျာနယ်)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ ရောက် အင်အားစုများရဲ့ “စနစ်ဆိုးနဲ့ စစ်ဂျိုးခွာစို့” ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတာသင်္ကြန် မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး သံချပ်များ။
2012 Thingyan Than Chat
လျှပ်စစ်တွေ ပိုလို့ ရောင်းတောင်စားနေရပါတယ်ဆိုပြီး....
မဲစာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့သူများ အိမ်ထောင်စု စာရင်း ယူ...
တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ မူးရစ်ရမ်းကားနေတဲ့ ကျေးရွာဥက္က...
လွတ်လပ်သန့်ရှင်းပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ...
ငါးမင်းဆွေ ၏ စာများကို ဈေးသူဈေးသားများ၏ သဘောဆန္ဒ ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ ရောက် အင်အားစုများရဲ့ “စနစ...